နောက်ဆုံးရသတင်းများ - ၃၃၆၆၂ ခု
About Thilawa Special Economic Zone
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on July 05, 2022
Eighth 47-member State Sangha Maha Nayaka Committee holds 11th Plenary Meeting
THE first-day session of the eleventh plenary meeting of the 8th 47-member State Sangha Maha Nayaka Committee was organized in the Maha Pasana Cave on Thiri Mingala Kaba Aye Hill in Yangon yesterday.
It is necessary to correctly understand the undertakings of the Tatmadaw for the national interests of the State due to political changes in successive eras: Senior General
PARTICIPATION of the Tatmadaw in the leading role of national politics of the State is based on the need of the State, and it is necessary to correctly understand the undertakings of the Tatmadaw for the national interests of the State due to political changes in successive eras, said Chairman of the State Administration Council Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing in meeting with officers, other ranks and families of Pathein Station of South-West Command yesterday morning.
MoBA Union Minister attends Nantsalein bridge opening on Khamti-Sinthay-Lahe road
THE opening ceremony of the Nantsalein Bridge located on the Khamti-Sinthay-Lahe Road was held on2July. The ceremony was attended by Union Minister for Border Affairs Lt-Gen Tun Tun Naung, Sagaing Region Chief Minister U Myat Kyaw, Commander of the North-Western Command Brig-Gen Than Htike, Chairman of the Naga Self-Administered Zone U Tun Tun Win, regional government ministers, region/district/township department officials and local people.
MoFA Union Minister meets Thai Deputy Prime Minister and Foreign Minister
U Wunna Maung Lwin, Union Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar, met Mr Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand at 2:15 pm on4July 2022 at the Aureum Palace Hotel, on the sidelines of the 7th Mekong-Lancang Cooperation Foreign Ministers’ Meeting, held in Bagan, Myanmar.
Myanmar hosts 7th Mekong-Lancang Cooperation Foreign Ministers’ Meeting in Bagan
MYANMAR hosted the 7th Mekong-Lancang Cooperation Foreign Ministers’ Meeting on the morning of4July 2022 at Aureum Palace Hotel in Bagan.
CHAIRMAN of the State Administration Council Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing inspected Pathein Airbase yesterday morning.
UEC inspects Shan Nationalities League for Democracy under Election Commission Law
THE Union Election Commission looked into the political parties whether they conducted systematically for the membership of the parties, party funds and property, savings, maintenance, usage, audition and liquidation and parties’ procedures under the UEC Law Section 10 (L) “supervising, causing to supervise and guiding the political parties to carry out under the law”.
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေနှင့်အညီစစ်ဆေး
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀ ( ဌ ) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထား သော “နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံရေးပါတီများကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်စေခြင်း” တာဝန်နှင့်အညီ နိုင်ငံရေးပါတီ များ၏ ပါတီဝင်အင်အား၊ ပါတီ ပိုင်ရန်ပုံငွေနှင့် ပစ္စည်းများစုဆောင်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စာရင်း ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပါတီဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိတို့ကို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
မြန်မာစံလက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ကူညီပံ့ပိုးသူမွမ်းမံသင်တန်း Phase-I ဖွင့်လှစ်
နားမကြားသောကလေးများကျောင်း (မန္တလေး)၌ ဖွင့်လှစ်ပို့ချမည့် မြန်မာစံလက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ကူညီပံ့ပိုးသူမွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထား ရေးဝန်ကြီးဌာန EC ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
သတင်းစာများ - ၁၃၂၉ ခု
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ February 06, 2019
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ : 2019
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့။
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ February 05, 2019
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလကွယ်နေ့၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်၊ တနင်္လာနေ့။
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ February 04, 2019
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့။
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ February 03, 2019
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်၊ စနေနေ့။
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ February 02, 2019
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်၊ သောကြာနေ့။
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ February 01, 2019
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့။
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ January 31, 2019
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ January 30, 2019
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်၊အင်္ဂါနေ့။
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ January 29, 2019
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၈ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်၊ တနင်္လာနေ့။
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ January 28, 2019